LR1-D 220V 380V 415V 440V 660V Thermal Ngaphezulu Relay
LR1-D Thermal Ngokweqile edluliselwe
LR1-D series overload thermal relay ilungele ukukhuselwa kobushushu kwisekethe ene-Ac50 okanye i-60Hz, i-voltago ukuya kwi-660v, i-motor powor ukuya kwi-45KW okanye ilahleko. Inonamathiselo eyahlukileyo kunye nomsebenzi wokuhlawula umsebenzi wokuyeka. Inokulungiswa kwi-contactor kwaye inokulungiswa ngokuzimeleyo. Imveliso yenziwe ngokungqinelana ne-IEC 60947-4.
JR28N (LRD) 0.1-140A Ukukhutshelwa kobushushu kwiThermal
Olu luhlu lwe-relay overload relay lunokusetyenziswa kwisekethe ye-50Hz kr60Hz, ilinganise umbane we-insulation 660V, ulinganise i-0.1-140A yangoku yokukhusela ikhefu lesigaba xa isoverload motor yombane.
Ipakethi ineendlela ezahlukeneyo kunye nembuyekezo yobushushu kwaye inokufakwa kwi-CJX2-D yothotho lwe-AC. Olona hlobo lokuhambisa luhamba phambili kwiminyaka yee-90 kwihlabathi. Iimveliso zithobela i-IEC 60947-4
LR9-F Thermal Ngokweqile edluliselwe
I-3UA yokulayisha umthwalo ongaphezulu kobushushu
Ukuhanjiswa kwe-3UA ye-thermal kulungele i-AC50Hz kr 60Hz, i-voltage ukuya kwi-660 ~ - 1000V kwaye yangoku ukuya kwi-630A. Imoto ye-AC ngokubanzi yokusebenza ixesha elide okanye okungasebenziyo, imbuyekezo yeqondo lobushushu. kunye nesalathiso sohambo. Inokubuyela ngokuzenzekelayo ize iphinde ibuye. Ingalungiswa kunye lwekontraka kunye. Kananjalo zilungiswe ngokuzimeleyo.
DZ116 (MS 116) 0.1A ukuya 100A motor Starter
I-DZ116 (MS 116) yokuqalisa iimoto sisikim sokukhusela iimoto esinokuthenjwa kunye neendleko. Inoluhlu olubanzi kakhulu lwezicelo. Ngokubanzi isetyenziselwa ukuhambisa ubunjineli kunye nesityalo, inkqubo yezamashishini, inkqubo yebhanti, ishishini lamachiza, ishishini lokuxuba amayeza, kubandakanya inkqubo yokwakha oomatshini abazihambisayo (njengeenkqubo zokumisa umoya), umzi-mveliso wokhuselo lokusingqongileyo, isityalo samandla, ukucoca amanzi kunye nonyango lwelindle, isixhobo somatshini Ikaliwe ngoku ukusuka ku-0.1A ukuya ku-100A. Ukugcwala okuphezulu okuthembekileyo nokuthembekileyo, isekethe emfutshane, isigaba esaphukileyo kunye naphantsi kwevolthi yokukhuselwa kweemoto kunye nesekethe.
3p 4p 16 ~ 1250A Adjustable MCCB / ityala oluxonxiweyo yesekethe full
Singumvelisi omkhulu wezinto zombane ezisezantsi zombane, isixhobo sekhebula, isixhobo sombane.
I-JVM2 Breaker ifanelekile kwi-AC 50Hz, 250 / 440V yesekethe ngokugcwala kakhulu kunye nokukhuselwa kokuvuza komhlaba. Ukulinganiswa okwangoku kulungelelaniswa ukusuka kwi-25A ukuya kwi-1600A. Umsebenzisi unokukhetha okwangoku okufanelekileyo ukukhuselwa ngcono ngokuchasene nokugcwala kakhulu kunye nesekethe emfutshane. Iimveliso zithobela i-NFC 61450.
Ikaliwe umbane we-insuiating: 750v
Ikaliwe amandla ombane: 690 nangaphantsi
Umthamo wokuqhawula omfutshane wokugqibela: 25KA ~ 150KA
Iinkonzo zokujikeleza amandla okujikeleza okufutshane: 25KA ~ 150KA
Olu luhlu lwamalungu aqhubayo aqhubekekayo afakwe ngaphezulu kwe-LA1-D yolawulo lokudlulisa okanye isixhobo se-LC1-D. Isetyenziselwa ukwandisa unxibelelwano lweendawo zonxibelelwano ezincedisayo. Ngenxa yomsebenzi woqhakamshelwano lwe-sliding friction, le mveliso inokuzicoceka, iqinisekisa ukuthembeka kwesekethe.
LA2-D ulibaziseko edluliselwe ilungele LC1-D AC lwekontraka kunye LA1-D iqela zonxibelelwano abangabancedani, ndawonye kwi-LC3-D star-delta decompression starter, esetyenziselwa motor ukuqala.
Ukubonelela nge-1p yesiseko fuse AD 22 × 58 kunye nefuse de type 60A 100A
I-PG JVM8 uthotho lwentsalela ehleliyo ikulungele i-AC 50 / 60Hz, 250 / 440V yesekethe, ethintela ukulayisha ngaphezulu, isekethe emfutshane njl. Ukulinganiswa kwangoku kokukhuselwa okugqithisileyo kunokulungelelaniswa.
I-JVM 5 (EZC) yohlobo lwetyala lesekethe
I-JVM5MCCB sisisombululo esilula kwaye esingenamda esinokuhlangabezana nazo zonke iimfuno zokukhusela amandla asezantsi.
Umaphuli wesekethe unesakhiwo esihambelanayo kunye nomgangatho onokuthenjwa, ophucula kakhulu ukubonwa kwesahluko esiphezulu. Kuyabonakala kuyilo ukuba izinto ezi-riveting kwindlela yokusebenza kufuneka zihambelane nemveliso yokwenyani yoyilo; icandelo ngalinye akufuneki libanalo ubalo oluchanekileyo kuphela, kodwa likwaqwalasele nentsebenziswano phakathi kwabo, ukwenzela ukuba bonke abadibeneyo bahlangabezane nemigangatho yokulinganisa. Inokuqondwa kuhlalutyo lokulinganisa ukuba iimpawu zesenzo esikhawulezileyo kwinkqubo ye-electromagnetic zihambelana ngokusondeleyo nendlela yokusebenza. Emva kokuba ixabiso lokulinganisa lifunyenwe ngophando lwethiyori, ukuqinisekiswa okungqongqo kovavanyo kuyafuneka ukuhlangabezana nemigangatho yemveliso; ulwandiso lwenkqubo yokulinganisa yokufudumeza umbane Ixabiso lexesha lokuhamba lifuna ukufunyanwa ngokusekwe kwindibaniselwano yexabiso elibaliweyo kunye nexabiso elililo.
I-DZ116 (MS116) I-Star Starter
Isiqalo semoto ye-DZ yinkqubo ethembekileyo neyonga iindleko yokhuselo lweemoto.
Inoluhlu olubanzi kakhulu lwezicelo. Ngokubanzi isetyenziselwa ubunjineli kunye neefektri, iinkqubo zorhwebo, iinkqubo zebhanti yokuhambisa, amashishini amachiza, kubandakanya unyango lwenkqubo, ishishini lokuxuba amayeza, ukwakha oomatshini (ezinje ngeenkqubo zokupholisa umoya), iifektri zokhuselo lokusingqongileyo, izityalo zamandla, ukucoca amanzi kunye nogutyulo lonyango, isixhobo somatshini , Okwangoku ikaliwe ivela kwi-0.1A ukuya kwi-100A. Inokuqhuba ngokufanelekileyo nangokwenyani okuthembekileyo, isekethe emfutshane, ukusilela kwesigaba kunye nokukhuselwa kokungabikho kombane kwiimoto kunye neesekethe.
LR2-D Thermal Ngokweqile edluliselwe 0.1 ~ 93A
Olu luhlu lwe-relay overload relay lunokusetyenziswa kwisekethe ye-50Hz kr 60Hz, ulinganise umbane we-insulation 660V, ulinganise i-0.1-9sA yangoku yokukhusela i-bresk yesigaba xa i-motor isoverload. Ipakethi ineendlela ezahlukeneyo kunye nembuyekezo yobushushu kwaye inokufakwa kwi-LC-D yothotho lwe-AC. Olona hlobo lokuhambisa luhamba phambili kwiminyaka yee-90 kwihlabathi. Iimveliso zithobela i-IEC60947-4.